XOG: Kheyre oo Markii ugu horeysay u safraya Imaaraadka Carabta & Sababta oo la ogaaday. – Xeernews24
XOG: Kheyre oo Markii ugu horeysay u safraya Imaaraadka Carabta & Sababta oo la ogaaday.
4. Februar 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Xasan Cali Khayrre Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa in dhawaan ay gaadhaan magaalada Abuu Dubai ee dalka isu-tagga Imaaraadka Carabta sida ay noo xaqiijiyeen Xubno ka tirsan Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya.
Safarka Khayrre ayaa la sheegay in ay isku maandhaafayn xubno ka tirsan Madaxtooyada kaas oo maalmihii la soo dhaafay aad looga hadal haayo Muqdisho gaar ahaan fadhiyada siyaasiinta.
Xidhiidhka dowladda Federaalka ee soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa calaamad su’aal ay dul saarneyd, tan iyo wixii ka dambeeyay markii Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka ay xidhiidhka u jareen Qatar, isla markaana dowladda Soomaaliya ay mowqif dhex dhexaad ka qaadatay, hase ahaatee Imaaraadka iyo Sacuudiga ay culeys ku saareen in xidhiidhka u jarto Qatar.
Sidoo kale Safarka ayaa la filayaa in uu ku soo aado waqti uu jiro tuhun laga qabo xogta ay Imaaraadka ka haayaan weerarkii lagu qaaday Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid kaas oo dhacay 20-kii bishii December sanadkii 2017.
Si rasmi ah looma shaacin Xiliga uu safarka u baxayo Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayrre, balse xubnaha aan la hadalnay ayaa noo sheegay in dhawaan ay ku beegan tahay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/02/kheyre.jpg 340 660 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-02-04 10:46:122018-02-04 10:46:12XOG: Kheyre oo Markii ugu horeysay u safraya Imaaraadka Carabta & Sababta oo la ogaaday.
Diyaarad ay lahaayeen ciidamada Ruushka oo lagu soo ridey gobolka Idlib dalka... Israaiil oo duqeyn ka geysatay Masar, Madaxweynaha Masar oo raali ka ah!(ceeb...